अक्षय कुमारको ‘हाउसफुल ४’ धमाका – Mero Film
अक्षय कुमारको ‘हाउसफुल ४’ धमाका
मल्टीस्टारर कमेडी फिल्म ‘हाउसफुल’को चौथो फिल्मको तयारी धमाधम भैरहेको छ ।साजिद खान तथा साजिद नाडियाडवालाको यो फिल्ममा अहिले सम्म अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बबी देवल, अभिषेक बच्चन, कृति सेनन, कियारा आडबानी, परिणीति चोपडा, पुजा हेगड़े, बोमन ईरानी तथा चंकी पाण्डेले अभिनय गरिसकेका छन् ।
सुन्नमा आएको छ, फक्स स्टार इन्डियाले करिव २०० करोड भारुमा साजिद नाडियाडवालाको फिल्म किनेको छ । यसमा फिल्मको राइट्स, थिएटर डिस्ट्रिब्युशन, ओभरसिज डिस्ट्रिब्युशन, स्याटेलाइट तथा डिजिटल राइट्स सबै सामेल छ । यसको अफिसियल अनाउन्स्मेन्ट भने हुन बाकी छ ।
हाउसफुल ४ बलिउडको आज सम्म कै सबै भन्दा बढी कमेडी तथा ३डी कमेडी फिल्म भन्ने गरिन्छ । फिल्ममा नाम चलेका कलाकार छन्, साथै यसको बजेट पनि धेरै रहेको छ । आशा गरौ फक्स स्टार इन्डियाले यस फिलबाट राम्रो कमाइ गर्ने छ ।
२०७४ चैत १६ गते १०:५६ मा प्रकाशित
क्याट्रिना र विकीको हल्दी सेरेमनी आज, को-को आउदैँछन् ?
विकी र कट्रिनाको विवाहमा सुरक्षाको जिम्मा सलमान खानका बडीगार्ड शेरालाई !
विकी र कटरीनाको विवाहमा किन पर्यो उजुरी ?
रेड वनपीसमा बोल्ड मौनी राय